Sida loo aqoonsado isbeddelka hadda jira adoo isticmaalaya kanaalka Donchian ee Xulashada Jeebka - Pocket Option Review
Shuruudaha & Shuruudaha
Sida loo aqoonsado isbeddelka hadda jira adoo isticmaalaya kanaalka Donchian ee Xulashada Jeebka
Kanaalka Donchian waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu fiican ee Pocket Option ay bixiso si loo aqoonsado isbeddellada hadda jira.
1 Deji tilmaame kanaalka Donchian ee Xulashada Jeebka
2 Waa maxay Donchain Channel
3 Istaraatiijiyada Kanaalka Donchian: Sida loo isticmaalo Kanaalka Donchian ee Doorashada Jeebka
4 Iibso kooxda sare
5 Ku iibi kooxda hoose
Deji tilmaame kanaalka Donchian ee Xulashada Jeebka
Si aad u dejiso Kanaalka Donchian ee Doorashada Jeebka . Waxaad u baahan tahay inaad marka hore gasho akoonkaaga Haddii ay dhacdo inaadan hal gujin halkan ku haysan. marka xigta, guji badhanka tilmaame oo ka dooro magaca liiska.
Hadda, dhagsii astaanta qalinka oo beddel midabada si aad u aragto muuqaal wanaagsan iyo ganacsi raaxo leh.
Waa maxay Donchain Channel
Kanaalka Donchian waa tilmaame isbeddel ah oo uu sameeyay aabbihii isbeddelka ee raacay Richard Donchian bartamihii qarnigii 20aad. Tilmaamahan waxaa laga sameeyay isku dhafka xisaabinta celceliska dhaqdhaqaaqa. Haddii aad si sax ah u ilaaliso tusaha, waxa aad ku arki doontaa tusaha saddex sadar halka xariiqda kowaad uu yahay qiimaha ugu sarreeya ee amniga ee muddooyinka n si la mid ah, xariiqda saddexaad waa qiimaha ugu hooseeya ee amniga muddooyinka n iyo inta u dhaxaysa qaybta sare. iyo khadka hoose waa kanaalka Donchian.
Istaraatiijiyada Kanaalka Donchian: Sida loo isticmaalo Kanaalka Donchian ee Doorashada Jeebka
Isticmaalka tilmaamuhu ma aha mid adag. Ma heli doontid arrimo badan fahamka fikradda. Asal ahaan waxaad u baahan tahay inaad fahamto aasaaska saddexda sadar ee tusaha. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa saddex xariiq oo abuura wax iibsiga iyo iibinta fursadaha. Xariiqda koowaad waxay u taagan tahay isbeddelka bullish-ka si la mid ah, xariiqda hoose waxay u taagan tahay isbeddelka isbeddelka iyo xariiqda dhexe waxay u taagan tahay celceliska laba.
Iibso kooxda sare
Marka qiimuhu ka soo go’o khadka dhexe ee hoose ka dibna qiimuhu wuxuu weli ka sii sarreeyaa khadka dhexe waa calaamad muujinaysa isbeddelka qulqulka iyo halkan waxaan ku dhejin karnaa ganacsi iibsi.
Ku iibi kooxda hoose
Sidoo kale, marka qiimuhu ka soo go’o xariiqda dhexe ee sare, waxaad sugtaa oo ogaanaysaa in qiimaha ka hooseeya khadka dhexe uu yahay wakhtiga ugu fiican ee la furi karo ganacsiga iibka.
Markaa, anigu qaybtaydii waan ka soo baxay. Waxaan kuu sharxay sida loo isticmaalo kanaalka Donchian oo aad uga ganacsato isla. Waxa ugu fiican ee aad samayn karto maanta waa isku day inaad istiraatijiyad ganacsi this on Pocket Option demo account oo aad u guurto Jeebka Option dhabta ah hal mar, aad ku kalsoon tahay ku filan. sidoo kale hoos ku faallooda oo nala wadaag fikradahaaga. Ilaa iyo markaas ganacsi farxad leh! 🙂
Istaraatiijiyada Kanaalka Donchian
Baro farshaxanka isticmaalka tilmaame MACD ee Xulashada Jeebka
MACD (Dhaqdhaqaaqa Celceliska Isku-dhafka iyo Kala-duwanaanta) waa isbeddel raacaya tilmaame Xulashada Jeebka ay bixiso. Waxaad ka heli kartaa qaybta isbeddelka ee liiska tilmaamayaasha. Isku-dubbaridka celceliska...
Istaraatiijiyad fudud oo SMA ah oo aad si fudud ugu isticmaali karto Xulashada Jeebka
Isdiiwaangelintu waa bilaash waxayna qaadanaysaa ilbiriqsi kaliya... Waa maxay celceliska dhaqaaqa fudud (SMA)? Celceliska dhaqdhaqaaqa fudud waa mid ka mid ah noocyada celceliska dhaqdhaqaaqa. Celceliska dhaqdhaqaaqa...
Waa maxay EMA iyo sida loogu isticmaalo Xulashada Jeebka?
Isdiiwaangelintu waa bilaash waxayna qaadanaysaa 5 ilbiriqsi oo kaliya... Maqaalkeygii ugu dambeeyay, waxaan daboolay Sida loo isticmaalo SMA ee Doorashada Jeebka . Maqaalkan, waxaan ku...
Isticmaalka kanaalka Donchian ee RSI si loo furo ganacsiyo faa’iido leh
Hello...sidee tahay Maanta Maqaalka. Waxaan doonayaa inaan ka hadlo ilaaha tilmaamayaasha isbeddelka ie kanaalka Donchian . Kanaalka Donchian kaligiis waa tilmaame weyn si kastaba ha...
Kanaalka Donchian waa mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu fiican ee Pocket Option ay bixiso si loo aqoonsado isbeddellada hadda jira. Deji tilmaame kanaalka Donchian...
Previous articleZig Zag oo leh Williams %R ee Doorashada Jeebka
Next articleIsticmaalka kanaalka Donchian ee RSI si loo furo ganacsiyo faa’iido leh